ဂူဂဲလ် Analytics မှလူမှုရေးအစီရင်ခံခြင်း Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 14, 2012 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 13, 2012 Jenn Lisak Golding
ဂူဂဲလ်မှ PostRank ကိုဝယ်ယူပြီးသည့်နောက်တွင်လူမှုရေးအစီရင်ခံမှုများကို Google Analytics တွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအစီရင်ခံစာအသစ်ငါးခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာများသည်ရရှိသောမှတ်ချက်များ၊ လင့်များ၊ ဖော်ပြချက်များ၊ တွစ်တာများနှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာမက်ထရစ်အရေအတွက်ပေါ်အခြေခံပြီးအကြောင်းအရာများကို“ အမှတ်ပေး” သည်။ အစီရင်ခံစာတစ်ခုစီသည်သင်၏လူမှုရေးအစီရင်ခံမှု / စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုလိုအပ်ချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။
1. ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အကြောင်းအရာအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည်အကြောင်းအရာများကို“ Last Interaction” နှင့်“ Assisted Social Conversations” မှဖြိုခွဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သုံးစွဲသူသည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းမှနောက်ဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများသည်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းနောက်ဆုံးအချိန်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ် Analytics ထဲမှာ၊ လူမှုရေး tab ဟာ Standard Reporting option အောက်မှာရှိတယ်။
2. ပြောင်းလဲခြင်းအစီရင်ခံစာသင်သည်သင်၏ site သို့မဟုတ် page ၏တိကျသောပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်“ မှတ်ချက်ပေးရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်” စာမျက်နှာပေါ်လာသည့်ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များအရေအတွက်ကိုညွှန်ပြသည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုရေတွက်နိုင်သည်။ တိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ဘလော့ဂ်သည်ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်စာဖတ်သူများကိုမည်မျှထိတွေ့ဆက်ဆံနေသည်ကိုသင့်အားပြောပြသည်။
Google Analytics အတွင်းအသွားအလာရင်းမြစ်များ> လူမှုရေး> စကားဝိုင်းများမှ Conversions Report ကိုရှာပါ။
3. လူမှုအရင်းအမြစ်များအကြောင်းအရာတစ်ခု၏အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာရန်အတွက်ခွင့်ပြုပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Facebook တွင်ကြော်ငြာတစ်ခုမည်သို့ပျံ့နှံ့သွားကြောင်းနှင့်တူညီသောကြော်ငြာတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားကြော်ငြာတစ်ခုကတွစ်တာတွင်မည်သို့မည်ပုံရှိသည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထို့နောက်ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို အခြေခံ၍ အကြောင်းအရာအတွက်ရုပ်သံလိုင်းသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်တိတိကျကျညှိချက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Google Analytics အတွင်းရှိ Traffic Sources> Social> Sources အောက်ရှိ Standard Reporting tab တွင် Social Sources ကိုရှာပါ။
4. လူမှုရေးပလပ်ဂင်များဘလော့ဂ်၊ အချက်အလက်၊ သို့မဟုတ်အခြားတင်ထားသောအခြားအကြောင်းအရာများ၏လူကြိုက်များမှုကိုတိုင်းတာသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ကြော်ငြာများ၏ရေပန်းစားမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဤသည်အထူးထိရောက်သောဘာရိုမီတာဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ် Analytics တွင်မျှဝေခြင်းအစီရင်ခံစာများကို Traffic Sources> Social> Plugins အောက်ရှိ Standard Report tab တွင်ရှာဖွေပါ။
5. လုပ်ဆောင်ချက်စီးကြောင်း၎င်းသည်လူမှုရေးပလပ်အင်အစီရင်ခံစာ၏တိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မျှဝေသည့်အကြောင်းအရာအတွက် URL၊ မျှဝေခြင်းပုံစံ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မျှဝေမည်၊ မျှဝေသူများနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ရှယ်ယာအောင်သောအခါ။
Google Analytics တွင် Activity Stream ကို Traffic Sources> Social> Sources> Activity Activity tab အောက်ရှိ Standard Report tab တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤအစီရင်ခံစာများကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ ရိုးရိုးလေးသာ sign up လုပ်ပါ www.google.com/analytics/ခြေရာခံရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ URL ကိုထည့်ပါ၊ ခြေရာခံရန်စာမျက်နှာတိုင်းသို့ထုတ်လုပ်ထားသော tracking ကုဒ်ကိုကူးယူပါ။ သင်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Tags: လှုပ်ရှားမှုanalytics googleလူမှုမီဒီယာလူမှုရေးအစီရင်ခံခြင်း
15:2012 pm မှာဇွန် 9, 34
အကယ်၍ သင်သည်လူမှုမီဒီယာတွင်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပါက (သင်ဖြစ်သင့်သည်!) အောင်မြင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤသည်ကသင်၏ရှေ့ဆက်သွားသင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာကိုလမ်းပြကူညီနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် Twitter ရေးသားချက်များသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိပါကသင်၏အားစိုက်ထုတ်မှုများကိုပိုမိုထည့်သွင်းထားခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။